छातीमा समस्या देखिएपछि डा. गाेविन्द केसी अस्पताल भर्ना
काठमाडौँ । छातीमा अत्याधिक दुखाई भएपछि डा. गोविन्द केसी अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
डा. केसीलाई सोमबार बिहान ४ बजे अस्पताल भर्ना गरिएको हो । मनमोहन कार्डियोथोरासी भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर महाराजगन्ज ईमर्जेन्सी विभागमा डा. केसीको उपचार भइरहेको छ ।
हाल उनको उपचार चलिरहेको र रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।